Xildhibaan katirsanaa baarlamaanka cusub oo ku geeriyooday gudaha Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXildhibaan katirsanaa baarlamaanka cusub oo ku geeriyooday gudaha Muqdisho
Marxuum Siciid Xasan Geedi. [Xigashada Sawirka: Radio Shabelle]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsanaa baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay oo Axad ahayd ku geeriyooday gudaha magaalada Muqdisho, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa.
Xildhibaan Siciid Xasan Geedi oo dhawaanahaan xanuunsanaa ayaa ugu dambayn xalay ajashii Alle u timid, sida ay ku warantay idaacada maxaliga ah ee Radio Sheballe ee kutaala Muqdisho oo soo xigatay xubno katirsan qoyska marxuumka.
Xldhibaanka ayaan ka qeybgalin doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee asbuucii lasoo dhaafay ka dhacday Muqdisho, oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loogu doortay Madaxweyne, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo baarlamaanka ku dhow.
Sida ilo-wareedyadu sheegayaan maanta oo Isniin ah ayaa marxuumka aas qaran loogu sameyn doonaa Muqdisho.